Infusions laxative, fanafody taloha sy mahomby amin'ny fitohanana | Nutri Diet
Michael Serrano | | sakafo, Resipeo mahasalama
Ny infusions laxative dia iray amin'ireo fitsaboana fitohanana tranainy indrindra misy. Misy andiana zavamaniry izay nampiasaina tamin'ity tanjona ity eran'izao tontolo izao nandritra ny an'arivony taona maro.
Fantaro izay zavamaniry azonao itokisana rehefa mila laxative voajanahary ianao, ary koa zavatra maro hafa momba ny fitohanana. Olana iray misy fiatraikany amin'ny tsirairay indraindray sy ny ankamaroan'ny fotoana dia tsotra hamahana toy ny mipetraka milamina mankafy infusion mafana.
1 Inona no antony mahatonga ny fitohanana?
2 Zavamaniry misy vokany laxative
3 Inona no hohanina ary inona no tsy
Inona no antony mahatonga ny fitohanana?
Ny olona iray dia heverina fa manana fizarana fitohanana rehefa ny isan'ny fitsidihana isan-kerinandro ny trano fandroana dia latsaky ny telo. Misy resaka fitohanana mafy rehefa fotoana iray na aotra ny tarehimarika. Fa tokony homarihina fa ny fitohanana dia tsy aretina.
Matetika ny antony mahatonga ny fitohanana dia ny tsy fisian'ny fibre (legioma, voankazo, voamaina manontolo ...) amin'ny sakafo. Etsy ankilany, tsy fahita matetika ny antony mahatonga ny aretina na ny voka-dratsin'ny fanafody sasany.
Ny tsinay dia miasa amin'ny fahafaha-miasa feno tohanan'ny mahazatra, na amin'ny fandaharam-potoana na amin'ny sakafo. Ny fampidirana fiovana tampoka ao (toy ny mitranga rehefa mandeha any an-tany hafa) dia mety hiteraka fitohanana. Ny toe-po dia antony iray hafa misy fiatraikany amin'ny asany: ny adin-tsaina, ny fanahiana na ny famoizam-po dia mety hanakana anao tsy handeha any amin'ny trano fidiovana matetika.
Farany, ny mitarika fomba fiaina mipetrapetraka dia mampitombo ny fahafaham-piterahanao. Ny fanaovana fanatanjahan-tena tsy tapaka (farafahakeliny intelo isan-kerinandro) dia hanampy ny fivalananao handroso mora kokoa, ary koa ny vatana ankapobeny hiasa tsara kokoa.
Zavamaniry misy vokany laxative
Ny infusions dia misy ampahany telo: ny singa fototra (mety ho zavamaniry na maro), rano mafana ary zava-mamy (siramamy, tantely ...). Ity farany dia tsy voatery ary ny anjara asany dia ny fanoherana ny tsiro mangidy avy amin'ny zavamaniry sasany ary hahatonga ny fisotroana zava-pisotro ho mahafinaritra kokoa. Amin'ny lafiny iray, ny andraikitry ny rano amin'ny fampidirana dia zava-dehibe ihany koa, satria ny fitazonana hydration mety dia ilaina amin'ny ady amin'ny fitohanana.
Fahadisoana ny manantena fa avy hatrany ny vokatry ny fampidirana fanafody laxative. Afaka mandray na aiza na aiza manomboka amin'ny ora vitsivitsy ka hatramin'ny roa andro izy ireo, miankina amin'ny anton-javatra isan-karazany, ao anatin'izany ny hoe malemy na matanjaka ny hery laxative an'ny zavamaniry voafantina. Noho izany, ilaina ny tsy manadino ny manam-paharetana ary miandry azy ireo hahomby.
Ny fanafody voajanahary tena antitra (tera-tany amin'ny kaontinanta amerikana) hanala ny fitohanana dia infusions cascara sagrada. Mangidy ihany ny tsirony, saingy mora ny vahaolana. Ny zava-dehibe dia izay mazàna miasa tena tsara ho an'ny rehetra. Afaka mahita izany ianao any amin'ny ankamaroan'ny magazay vokatra voajanahary.
Izy io dia heverina ho iray amin'ireo zavamaniry mahomby indrindra hiadiana amin'ny fitohanana. Teratany Azia, ny senna dia manampy ny tsinay hamindra seza, izay ilainao fotsiny rehefa sarotra aminao ny mankany amin'ny trano fidiovana. Na dia voajanahary aza, ny cascara sagrada sy ny senna dia sokajiana ho laxatives mahery. Noho io antony io dia tsara ny tsy hihoatra ny habetsahana (matetika ny pinch dia ampy) na ny fotoana (10 andro farafahakeliny) atolotra.
Na dia fantatra amin'ny toetran'ny diuretic aza izy io, ny dandelion dia afaka manampy amin'ny tranga malefaka amin'ny fitohanana. Misy vokany laxative malefaka azonao araraotina rehefa toa hadinon'ny vatanao ny mankao amin'ny fandroana.
Teratany Eropa, ity zavamaniry malaza ity dia naseho fa mandaitra amin'ny fitsaboana olana isan-karazany amin'ny fandevonan-kanina, ao anatin'izany ny fitohanana.
Amin'ity zavamaniry ity miaraka amin'ny hanitra mahafinaritra tombony dia azo avy amin'ny tsy fetezan'ny tsinay, ary koa ho an'ny fiasa tsara ny rafi-pandevonan-kanina amin'ny ankapobeny. Ny dite dipoavatra dia hevitra tsara hisorohana ny fitohanana, fa afaka manampy amin'ny fitsaboana azy io koa.
Izy io dia iray amin'ireo infusions miaraka amin'ny tombony betsaka azo avy aminy. Misy ny olona milaza fa manampy amin'ny fitsaboana ny fitohanana koa izy io.
Inona no hohanina ary inona no tsy
Ny infusions laxative dia hiasa mora kokoa amin'ny vatanao raha fantatrao izay sakafo manampy handresy ny fitohanana ary iza ireo no mampaharatsy azy.
Manoro hevitra anao hihinana legioma sy legioma betsaka, voamaina sy voankazo, indrindra ny voankazo tsy ampy rano. Ohatra, ny prune dia misy laxative voajanahary antsoina hoe sorbitol. Izy io koa dia manankarena amin'ny fibre tsy mety ritra, izay manampy ny fivalanana handalo haingana ny tsinay.
kosa, ny sakafo efa niotrika, ny ronono ary ny alikaola dia mety hampitombo ny olana. Mendrika ambara manokana ny raharahan'ny kafe. Ary, na dia manampy amin'ny fihetsiketsehana tsinay noho ny toetrany manaitaitra azy aza izy io, dia mety hiteraka tsy fahampian-drano sy fitohanana koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Infusions laxative